Taratasim-baovaon’ny RV : Fanentanana anaty media sôsialy hitrandrahana izay fifandraisan’ny zo nomerika sy ireo fiteny afrikàna · Global Voices teny Malagasy
Taratasim-baovaon'ny RV : Fanentanana anaty media sôsialy hitrandrahana izay fifandraisan'ny zo nomerika sy ireo fiteny afrikàna
Voadika ny 24 Avrily 2020 16:41 GMT
Afrika, fijeri'i Georgia Osinga avy ao amin'ny Tetikasa Noun.
Fanamarihan'ny Rising Voices: ity taratasim-pifandraisanay mpivoaka indroa isam-bolana ity dia manome famintinana ireo lahatsoratra farany nivoaka momba ireo endriky ny fampidirana nomerika, anatin'izany ny fidirana sy ny fampiasàna ireo fitaovana nomerika, ary koa ireo fomba hafa sy hetsika ahafahan'ireo vondrompiarahamonina mandray anjara feno anaty aterineto. Vakio eto ireo taratasim-pifandraisana efa nivoaka teo aloha..
Ry mpamaky hajaina, inona no tonga ao an-tsainao rehefa mieritreritra ny zo nomerika ianao? Nandritra ny fampianarana naharitra dimy herinandro, mpikatroka dimy ho an'ny fiteny manerana an'i Afrika no hifandimby hiresaka anaty fifampizaràna ireo zavatra niainany tsy mbola re hatrizay sy ny fijeriny manokana an'io olana io, amin'ny alàlan'ny mason'ny fiteny, ao amin'ny @GVSSAfrica.
Ity fanentanana anaty media sôsialy ity, nokarakarain'ny Rising Voices sy ny efitranom-baovao Sub-Saharan Africa ato amin'ny Global Voices, dia ampahany amin'ny tetikasa iray vaovao mahazo famatsiambolan'ny Collaboration on International ICT Policy ao Afrika Atsinanana sy Atsimo (CIPESA). Ezaka iray teo aloha fandraisanay anjara amin'ny fitrandrahana izay loza mananontanona ny zo nomerika nandritra ireo hetsika politika goavana nanerana an'i Afrika no ijoroan'io tetikasa io, ary mifantoka amin'ny “kabary fankahalàna, ny vaovao diso ary ny filàna vaniny eny anaty habaka an-tserasera afrikàna mandritra ireo vanimpotoana mafampàna ara-politika” teraka avy amin'ny maripamantarana manokana ny tena.
Raha toa ianao liana amin'ny fomba itazonan'ny fiteny ny anjara toerany ao anatin'ny sehatry ny zo nomerika, miangavy anao hanjohy ny @GVSSAfrica, mba hanatevenanao laharana ireo mpampiantrano ny @DigiAfricanLang efa nisy tany aloha ao anatin'ity fifanakalozandresaka mafonja ity! Azafady, jereo eto ny fandaharana feno.
Mandra-piandry izany, tsarà daholo!
Nankafizinao ve ireo fanentanana Twitter nahodina nandritra ny 2019, tao anatin'ny fankalazana ny Taona Iraisampirenena ho an'ny Fiteny Zanatany (#IYIL19)? Ny vaovao tsara dia hoe nitarinay hatraty amin'ny 2020 ilay ezaka fanentanana, tamin'ny fanohizana maneho ireo asa izay mbola mahafinaritra hatrany ataon'ireo mpikatroka ho an'ny fiteny teratany manerana izao tontolo izao. Raha toa ianao liana amin'ny fiteny teratany manerana izao tontolo izao sy izay tafiditra ao anatin'ny fampiroboroboana ary fanomezana aina vao ikatrohan-dry zareo, aza misaraka aminay! Azonao atao ihany koa ny mamaky ireo lahatsoratra fampahafantarana toy izao manaraka izao mba hamantaranao misimisy kokoa momba ireo mpampiantrano vao haingana, sy hatramin'ny asan-dry zareo ary izay fijeriny momba ny fiteniny.
José Chuvé Mengarí [es] momba ny sata misy ny fiteny Bésiro amin'izao fotoana izao, tenenina any atsinanan'i Bôlivia, ny fandavantenany amin'ny fitondàna ilay fiteny ho eny anivon'ireo andian-taranaka tanora, amin'ny alàlan'ny fitaovana haino amanjery, ary koa izay mandrisika azy amin'ity ezaka ity
Claudio Hernandez [es] momba ny Tu'un Savi — kazarana Mixtec avy any San Juan Mixtepec, Oaxaca, Meksika — ary ny fifanenàn'ny maripamantarana sy ny fiteny, ny niainany ny fifindran-toerana tamin'ny endriny maro, hatramin'ny fanomezana aina vao ny fiteny amin'ny alàlan'ireo media sôsialy.
Ho fanohanana ny fanaovana gazety eo an-toerana ao anatin'izao valanaretina misy izao, manolo-tànana ho an'ireo fandraharahàna madinika sy salantsalany manerana izao tontolo izao ny Google News Initiative amin'ny alàlan'ny fanomezana Famatsiambola ho Vonjy Poritra ho an'ny Asa Fanaovana Gazety. Azafady, jereo eto ny momba ireo fepetra ahafahana mahazo izany sy ny antsipirihany amin'ny fangatahana. Fetra farany ho an'ny fangatahana: 29 Aprily 2020 amin'ny 11:59 alina (PT)
MarginalizedAadhaar araka izay anoloran'i Subhashish Panigrahi azy ao amin'ny Anchor
The many languages missing from the internet atolotry ny BBC
Blind Users Struggle with State CoronavirusWebsites atolotry ny The Markup
Isaorana Eddie Avila nandray anjara tamin'ity taratasim-baovao ity.